Lady Gaga achange aine yake redhiyo show paApple Music | Ndinobva mac
Apple inomhanyisa mumhanzi sevhisi, Apple Music, zvakare inoita akasiyana emimhanzi zviteshi kuwanikwa kune vashandisi vayo, neBeats 1 ichive inonyanya kuzivikanwa, asi kwete iyo yega. Mukati meyakajairwa Apple Music chirongwa, uye mukati memwedzi waNyamavhuvhu, Lady Gaga achave neyake show.
Ichi chirongwa chinonzi GAGA Radio (zita risiri rekutanga), ichaburitsa Chishanu choga choga na11 am Pacific Nguva panguva Chishanu chega chega Nyamavhuvhu uye uko muimbi achataura nezve rake nyowani dambarefu Chromatica nezvose zvine chekuita nekugadzirwa kweiyo yazvino dambarefu
Iyi yakasarudzika chirongwa ichave nekutora chikamu kwevaDJ @BloodPop, @burnsmusic, @Vitaclub, uye @iamTchami. Sezvo isu tichigona kuverenga mune tsananguro yechirongwa ichi:
Kufemerwa kwaLady Gaga's hyperactive 2020 album Chromatica yakabva kunzvimbo yemashiripiti: yekutamba pasi. Kutasva kwema synths anopenya uye hoko dzinosunungura, inobata mufaro wega wemweya unowanikwa mukudikitira pasi pebhokisi re disco.
Chishanu choga-choga paGAGA RADIO, kudza mimhanzi yekutamba nekutaura nemaDJ, divas, nevagadziri vakamukurudzira uye vakabatsira kuunza Chromatica kuhupenyu. Chikamu chega chega chinosanganisirawo musanganiswa wakasarudzika kubva kune mumwe wevaeni vaGaga. Iko kupemberera kwemimhanzi yekutamba patinoida zvakanyanya.
Apple haisati yagadzirisa huwandu hwevanyori veMusic Music
Iwo achangoburwa manhamba epamutemo ehuwandu hwevanyori veMusic Music vanoenderana naJune 30, 2019, mwedzi umo maererano neApple, iyo yekumhanyisa mimhanzi sevhisi Apple yaive ne6o mamirioni vanyori. Kubva ikozvino, Spotify, mukwikwidzi wayo mukurusa, akangokura asiri-stop kusvika mamirioni mazana matatu evashandisi vakabhadharwa uye iyo yemahara vhezheni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Lady Gaga achange aine yake redhiyo show paApple Music
SoundSource 5 inorerutsa maratidziro ayo mune yazvino kugadzirisa